राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा समान धारणा विकास भयो भने पार्टी एकता कायम रहन्छ : देव गुरुङ (अन्तरवार्ता) — नयाँ कुरा
२०७७ भाद्र ६ , शनिबार
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक सङ्घर्ष चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । गत असार १० गतेबाट सुरु भएको स्थायी समिति बैठक लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । नेकपाको विवादको अन्तर्य पार्टीभित्र मात्रै सीमित छैन । यसको जरोकिलो निकै टाढा पुगेको छ । के हो त नेकपा भित्रको विवाद ? किन पार्टी बैठक नै बस्न सकेको छैन ? प्रस्तुत छ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं संसदीय दलको मुख्य सचेतक देव गुरुङसँग यसै विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी :
Interview with Nepal Communist Party (NCP) Chief Whip and the party’s Standing Committee member Dev Prasad Gurung
राष्ट्रका जल्दाबल्दा विषयमा छलफल गर्न सुरु भएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समिति बैठक स्थगित भएको लामो समय भएको छ । स्थायी समिति सदस्यको हैसियतमा भन्नुपर्दा यसरी बैठक अनन्त कालसम्म स्थगित हुनुलाई कुन अर्थमा बुझ्नुहुन्छ र नेकपामा विवाद बढ्नुको चुरो कुरो के कुरामा अन्तरलिङ्क भएको छ ?
निश्चय पनि यो सहज परिस्थिति होइन । यो एउटा सङ्कटको अवस्था हो । स्थायी समितिको बैठक एक प्रकारले डेडलकको अवस्थामा हुनु दुखद् कुरा हो । यसो हुनुमा पार्टीमा देखा परेको सङ्कटकै उपज पनि हो । यो सङ्कट खासगरी वैचरिक, राजनीतिक प्रश्नहरुकै बीचमा पैदा भएको हो । पार्टी बैठकमा तय भएका एजेन्डासँगै समसामयिक विषयमा पनि छलफल हुन पुग्यो । विगत केही समयदेखि राष्ट्रियताको विषयमा बसह हुँदै आएको हो । एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयबाट यसको सुरुवात भएको हो । अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा जाने कि नजाने ? अमेरिकाले आईपीएसको सदस्य नेपाल बनिसक्यो भनेर घोषणा नै गरिसकेको छ । त्यसमा प्रवेश गर्नेवित्तिकै नेपालमा अमेरिकी सेनाको क्रीडास्थल बन्न थाल्छ । त्यो अवस्थामा नेपालको स्वाधीनताको रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने लगायतका विषयबाट बहस सुरु भएको हो ।
त्यस क्रममा एमसीसी सदनबाट पास गर्न जोड दिने प्रवृत्ति र यथास्थितिमा हुँदैन भन्ने दुई धार देखिएको हो । यता पार्टीले कार्यदल बनाएर छलफल गर्दा सहमति नबन्दासम्म पास गर्न सकिँदैन भनेर सुझाव प्रतिवेदन पनि दिएको हो । त्यसपछि पार्टीमा त्यो विषयमा पटक पटक छलफल गर्नुपर्यो भनेर पनि उठ्यो तर पर्याप्त छलफल गर्न तयार नभएको देखियो ।
बरु पार्टीमा छलफल नगरी सदनबाट एमसीसी पास गर्ने पटक पटकका प्रयासहरु भए । तर पार्टीमा निर्णय नगरी सदनबाट कसरी पास गर्न सकिन्छ भन्ने भयो । यसमा काँग्रेसबाट सदन अवरुद्ध गरेर त्यो एजेन्डा पास गर्ने देउवापक्षको तयारीस्वरुप काँग्रेस संसदीय दलमा पटक पटक प्रस्ताव राखिएको हो । तर काँग्रेस संसदीय दलले त्यो कुरा अनुमोदन गर्न मानेन, सकेन । फेरि अर्को कुरा एमसीसी सम्झौता गर्दा सदनबाट अनुमोदन गराउने अभिन्न अङ्गको रुपमा राखेको अवस्था पनि होइन । त्यो पछि सरकारले प्रस्ताव गरेको विषय भयो । यो कुरा बुझेर नै प्रतिपक्ष सदन घेराउ वा अवरुद्ध गर्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन भन्ठानेर पछि हटेको हुनसक्छ ।
प्रतिपक्षको यो अवस्था र सत्तापक्षमा निर्णय नभएको यो परिस्थितिमा सभामुखले पनि यसलाई अघि बढाउन सकिँदैन भनेपछि अब निकास के त भन्ने प्रश्न उठ्यो । त्यसक्रममा सायद दल विभाजन गरेर काँग्रेसलाई कोलेसन गभर्मेन्टमा सहभागी गराउँदै मेजोरोटीसहित एमसीसी पास गराउनेसम्मका योजनाहरु भएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यसका लागि दल विभाजनमा ४० प्रतिशतको खुकुलो प्रावधान अघि सारेको हुनसक्छ । अध्यादेश आइसकेपछि बहस दल विभाजनतर्फ केन्द्रित हुन पुग्यो । बहुमत रहेको दल विभाजन हुँदा संसद हङ्ग पार्लियामेन्टमा जान्छ । हङ्ग पार्लियामेन्टमा गएपछि संसद कुनै पनि बेला भङ्ग हुनसक्छ । यसले प्रकारान्तरले संसद नै सिध्याउने उद्देश्य हो कि भन्ने शङ्का पैदा भयो । वर्तमान सङ्घीय गण्तन्त्रको मूल गुदी या मुटु संसद हो । संसद नहुने वित्तिकै संविधान प्यासिभ हुन थाल्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिको आदेश र निर्देशमा मुलुक चल्छ । राष्ट्रपतिले मुलुक चलाउने भनेको एक प्रकारको जङ्गी शासन हो । यसो गर्दा सङ्घीय गणतन्त्र सकिने भयो । प्रजातन्त्रमा पार्टी विभाजन सामान्य कुरा हो तर नेकपालाई पार्टी विभाजनको छुट छैन, दल विभाजनबाट लोकतन्त्र नै समाप्त हुनसक्ने देखिन्छ ।
तपाईंको भनाइको तात्पर्य नेकपामा विवाद आउनुका पछाडि एमसीसी जोडिएको छ भनेर बुझ्दा गलत नहुने भयो होइन ?
यसमा विवादै छैन । यसले दल विभाजनसँग जोडियो र तानियो । अध्यादेशको कुरा तानियो । अध्यादेशले दल फुटाउने र हङ्ग पार्लियामेन्ट बनाउने । हङ्ग पार्लियामेन्ट बनाउने कुराले संसद डिजल्भ गर्ने दिशामा जाने भयो । संसद भङ्ग भएपछि सिस्टम नै कोल्याप्स हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।
भनेपछि अहिलेको व्यवस्था नै कोल्याप्स गर्ने उद्देश्यले एमसीसी आएको भनेर बुझियो ?
हो । एकपछि अर्को जोडिँदै जाँदा डेमोक्रेसीमाथि नै हमला हुने भयो । यसैकारण बहस छलफल त्यसतर्फ मोडिनु स्वाभाविक हो । यो परिस्थिति भएका कारण दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुको समिक्षा वा आत्म मूल्याङ्कन गरिनुपर्दछ । राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई असर गर्ने, कुण्ठित पार्ने कुराका साथै व्यवस्थानै समाप्त हुनसक्ने देखिएपछि २० जना स्थायी समिति सदस्यहरुले अबिलम्ब बैठकको माग गरेर निवदन दिएका हौँ । यसरी निवेदन दिए पनि त्यो समयअवधिमा बैठक राख्न सक्नुभएन । बैठकको आयोजनाअघि नै चर्को विरोध भएपछि अध्यादेश त फिर्ता भइसकेको थियो । त्यसैबेला अध्यादेश फिर्ता भएपछि बैठकको औचित्य छैन भनेर परिभाषा गर्न खोजियोे । तर अध्यादेशप्रतिको दृष्टिकोण के हो ? त्यसको आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय बाँकी नै थियो । यद्यपि यो बेठीक थियो र हामीले फिर्ता ग¥यौँ भन्ने कुरा भएको भए सादय बैठकको औचित्य नरहन पनि सक्थ्यो । तर अध्यादेश ठीक थियो, सही थियो, अनावाश्यक रुपमा साथीहरुले विरोध गरेर मात्रै ब्याक हुनुपरेको हो, यो कुनै पनि समयमा क्रियाशील हुनसक्छ भन्ने देखिएपछि बैठकको औचित्य यथावथ रह्यो । यसले चिन्ता त हटेन । किनभने कुनै पनि समयमा फेरि अध्यादेश जारी गर्ने अवस्था रहन्छ । त्यो बुझेर नै स्थायी समिति बैठक बस्नुपर्छ, समीक्षा गर्नुपर्छ । समीक्षा नगरी हुँदैन भन्ने कुरा पार्टीमा उठिरह्यो । यसरी कुरा उठेपछि बल्लबल्ल स्थायी समिति बैठक राख्न तयार भयो ।
एमसीसी अनुमोदन गर्ने हिसाबले नै ४० प्रतिशतको प्रावधान खुकुलो बनाएर अध्यादेश ल्याएको भन्नेमा तपाईंहरुले प्रश्न गरिरहेका बेला स्थायी समिति बैठकको उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले थप पुष्टि गर्यो होइन ?
स्थायी समिति बैठकको उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्रीज्यूका अभिव्यक्तिहरु समीक्षाको विषय होला । दल विभाजन गर्ने अध्यादेश सही थियो भनेर पुष्टि गर्ने प्रयासहरु भए । बैठकको सुरुका दिन त्यसो भनेपछि त्यसको केही दिन अर्थात असार १४ गते अर्को दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो । नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको विषयले स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्यो । दल दर्ता त जोकसैले पनि गर्नसक्ला ठूलो कुरो नहोला तर त्यसमा पार्टी नेतृत्वको संलग्नता सम्बन्धी प्रश्नहरु पनि उठे । धेरैतिरबाट यस्ता कुरा आएपछि बैठकमा कुरा के हो ? भन्नेमा छलफल चल्यो । छलफल चल्दा चित्तबुझ्दो जवाफ आएन । पार्टी दर्ता प्रक्रियामा संलग्नताको आशङ्कामा नेतृत्वमाथि नैतिकताको प्रश्नहरु पनि उठ्यो तर त्यो एजेन्डाका रूपमा राखेरभन्दा पनि बैठक प्रारम्भका बेला बीचका कुरा उठाउने क्रममा उठाइएका थिए । त्यो रूपमा कुरा उठेपछि र केही आलोचनात्मक टिप्पणी गरेपछि पार्टीका अर्का अध्यक्ष बैठकमै आउन छोड्नुभयो । त्यसपछि असार १८ गते एकै पटक संसद बैठक अन्त्य गरियो ।
अप्रत्यासित रूपमा संसद बैठक अन्त्य गरेपछि हङ्गामा भयो । फेरि पनि पार्टी फुटाउने अध्यादेश आउँदैछ कि भन्ने चर्चाहरु हुन पुगे । यसबीचमा काँग्रेसको बैठक बस्यो । बैठकले कुनै पनि कोलिसनको सरकारमा जान सकिँदैन प्रतिपक्षमै बसेर फागुनमा महाधिवेशनको तयारी गर्ने भनेर निर्णय नै गर्यो । यो निर्णयले उहाँहरुमा कोलिसन सरकार बनाउन कुरा चलिरहेको रहेछ भन्ने बताउँछ । काँग्रेसले यस्तो निर्णय गरेपछि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने कुरा सहायद तत्काल स्थगित हुन पुग्यो । काँग्रेसले यस्तो निर्णय गरिसकेपछि दल अल्पमतमा पर्छ । अल्पमतमा परेपछि सरकार पनि गिर्छ । सरकार कन्टिन्यु गराउन त काँग्रेसको सपोर्ट अनिवार्य हुन्थ्यो । त्यसबाट पनि काँग्रेससँग कुन तहको कुरा भैरहेको रहेछ भन्ने सङ्केत देखाउँछ । काँग्रेस कोलिसनमा जान नचाहेपछि दल विभाजनको ठाउँमा के आयो त भन्दा अब सदन समाप्त गर्ने, संसद नै विघटन गर्ने त्यसपछि सङ्कटकाल लागू गर्ने र राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने भन्ने हल्ला आयो । अन्तरकुन्तर छलफलमा संसद भङ्ग गर्दा अर्को निर्वाचन तत्काल हुँदैन । संसद यो संविधानको मुटु हो । संसदको अभावमा राष्ट्रपति शासन आकर्षित हुन्छ, लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ, आदि तर्कहरुले गर्दा संसद विघटन पनि तत्काल स्थगित भएको देखिन्छ ।
भनेपछि पार्टीभित्रको विवादपछि असार २२ गते संसद नै भङ्ग गर्ने योजनामा प्रधानमन्त्री पुगेको भेटियो ?
त्यसको तयारी गरेको भन्ने आयो तर विरोधपछि रोकियो । १६ पछि एक प्रकारको डेडलक जस्तो भइरहेको थियो, वार्ता पनि भएको थिएन । भए पनि औपचारिकतामा सीमित थियो । २२ गते यो खालको हल्लाखल्ला र यस्तो कुरा आइसकेपछि बल्ल दुई अध्यक्षबीच कुराकानी गर्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । दुई अध्यक्षको बीचमा संवाद चलिरहेको तर निकास अझै पनि भएको छैन । यो सबै स्थितिले दल विभाजन, सङ्कटकाल, संसद विघटनको कसरत आदि चिन्ताको विषय भयो । पार्टी कमिटीमा आलोचना भइरहने, अध्यक्ष र सरकारको बारेमा पनि आलोचना भइरहने हो भने तत्काललाई स्थगित भए पनि कुनै पनि बेलामा लागू हुनसक्छ भन्ने आशय रहिरह्यो । यसमा अत्मसमीक्षाको कुरा नै रहेन ।
उहाँले अर्थात प्रधानमन्त्रीले पहिलेदेखि नै एमसीसी पास हुनुपर्छ र हुन्छ पनि भन्दै आउनुभएको हो । दल विभाजनदेखि संसद नै भङ्ग गर्ने र व्यवस्था नै मास्ने बाटोमा जानुपर्ने बाध्यता के रहेछ ओलीलाई केही विश्लेषण गर्नुभएको छ ? राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुुनै प्रभाव वा बाध्यताले पो हो कि ?
यसमा मुख्य समस्या राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई हेर्ने विषयमै समस्या रहेको अवस्था हो । राष्ट्रियतप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा अहिले साम्राज्यवाद र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको युग हो । अथवा उत्पीडित राष्टहरुको मुक्ति आन्दोलनको युग हो । उत्पीडित राष्ट्रहरु साम्राज्यवादको प्रभावबाट मुक्त हुने प्रक्रियाको चरणमा छन् । र, त्यो एक प्रकारले समाजवादी आन्दोलन उन्मुखको दिशामा गइरहेको अवस्था हो । विश्वव्यापी रुपमा एकाधिकार दलाल पुँजीवाद प्रभुत्व भएको हुनाले विश्व साम्राज्यवादको युग पनि भयो । विश्व साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्टहरुको मुक्ति आन्दोलनको युग भएको हुनाले यो बेलाको मेजर कन्ट्र्याडिसनमा एकातिर विश्व साम्राज्यवादी शक्तिहरु हुन्छन् अर्कोतिर उत्पीडित राष्ट्रहरु हुन्छन् । यो दुईटा बीचको कन्ट्र्याडिसन मेजर कुरा हो । यतिबेला यसको लिडिङ साम्राज्यवादी शक्तिहरुले गरिरहेको हुनाले त्यो शक्तिको डोमिनेसनमा ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एसियाली मुलुकहरु डोमिनेटड अर्थात उत्पीडित अवस्थामा छन् । यो वर्गअन्तरविरोध छ । यो नै वर्गसङ्घर्षको मूल कडीको कुरा हो । अहिले विश्व राजनीतिको मुख्य केन्द्रभाग यही वर्गसङ्घर्षमा केन्द्रित छ ।
यो अवस्थामा तेस्रो विश्वका वा उत्पीडित राष्ट्रहरुको राजनीतिक कार्यदिशा के हुन जरुरी हुन्छ ?
मुलुकलाई स्वाधीन बनाउने नै हुनुपर्छ । साम्राज्यवादी एकाधिकार दलाल पुँजीवादबाट नेपाललाई कसरी स्वाधीन बनाउने ? कसरी मुक्त गराउने ? यसबाट मुक्त गराएर आत्मनिर्भर हँुदै समाजवादको दिशामा कसरी लैजाने ? यो मेजर कार्यभार हुनुपर्ने हो । तर त्यो दिशामा जानुपर्ने बेलामा राजनीतिक रुपले यतिखेर शक्ति राष्ट्रको आड र संरक्षण नलिई हँुदैन भन्ने भयो । उसको संरक्षणमा बस्नुपर्छ, उसँग घनिष्ट दौत्य सम्बन्ध जोड्नुपर्छ । एमसीसी गडबड हुनेवित्तिकै यो दौत्यसम्बन्ध पनि गडबड हुन्छ र नेपाल सङ्कटमा पर्छ भन्ने साम्राज्यवादपरस्त चिन्तन र दृष्टिकोणले काम गरेको अवस्था हो । यो कन्ट्«याडिसनको वर्ग अन्तरविरोधमा ठीक उल्टो मार्क्सवाद विपरीत दृष्टिकोणले काम गर्यो । हुनुपर्ने उत्पीडित राष्ट्रको पक्षमा आन्दोलनको मुभमेन्ट केन्द्रित गर्नुपर्ने, कुनै पनि साम्रज्यवादको थिचिमिचोको विरुद्धमा लाग्नुपर्ने । असमामन सन्धि सम्झौता सके खारेज गरेर लैजानुपर्ने, नसके पनि अरू थप्न नदिने गरी जानुपर्ने अवस्था हो । तर पुराना असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्ने कुरा त टाढाकै विषय भयो, बरु अरु असमान सम्झौताहरु थप्दै लैजाने ट्रेन बढ्दैगयो । विदेशी एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । त्यो रुपले बढाउँदै लैजाने र एकाधिकार दलाल पुँजीवाद नै सम्पूर्णले भर पर्नुपर्ने चिन्तन दृष्टिकोण हावी हुन थाल्यो । राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशातर्फ जानै सकिएन । राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नेतर्फ पनि जान सकिएन । वल्र्ड बैङ्क लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र वित्तीय संस्थाहरुले जेजे लाइन बनाएका छन् त्यही लाइनलाई नेपालको सन्दर्भमा हुबहु कपी गर्ने प्रवृ ित्त देखिन थाल्यो । पश्चिमा एनजीओ आईएनजीओले जे लाइन तय गरेका हुन्छन् त्यसैको प्रभावबाट बढी चल्न थालियो । यसले गर्दा राष्ट्रियताप्रतिको दृष्टिकोणमा गम्भीर समस्या देखियो । समस्याको चुरो कुरा नै त्यही हो । अहिलेको वर्गसङ्घर्षको मूल कडी नै त्यहाँ छ । यस दृष्टिकोणले गर्दा अब उत्पीडित राष्ट्रहरुको डेमोक्रेसीको मुद्दामा पनि समस्या पैदा हुन थालेको हो ।
उत्पीडित राष्टको मुक्ति र स्वतन्त्रताको कुरा दलीय स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धा, दलगत र राष्ट्रिय सहमति जुटाउने कुरा, उत्पीडित राष्ट्रकोे स्वाधीनताको लागि त डेमोक्रेटिक राइटहरुलाई ठीकठीक ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बहुजाती, बहुभाषा, बहुधार्मिक विविधतायुक्त समाजलाई एकसूत्रमा कसरी समानताको अधिकारका आधारमा एक ढिक्का गराउने कुरा हुन्छ । यो राष्ट्रियताको मुद्दामा स्पस्ट नहुने वित्तिकै एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, अर्कोले अर्कोलाई गर्दै, निषेध गर्दै समुदायलाई विभाजन गर्ने अवस्था आउँछ । त्यस्तैगरी दलहरुको बीचमा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी रहेको अवस्थामा विधितायुक्त समाजमा दलहरुको बीचमा राष्ट्रियताको मुद्दामा सवैलाई सहमतिमा ल्याउने र राष्ट्रिय सहमतिको अभ्यास गर्नुपर्ने हो । त्यो मोडेलबाट लानुपर्ने हुन्छ । तर दलहरुले एकले अर्कोलाई सिध्याउने, विस्थापित गर्ने र एकअर्कामा शत्रुतापूर्ण व्यवहारबाट जाने कुरा भए । पार्टीभित्र पनि अहिलेको समयमा कम्युनिस्टहरुलाई बृहत्तररुपमा एकता गरेर जानुपर्ने आवश्यकता हो । सबै कम्युनिस्टहरुलाई एकताबद्ध गरेर नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकतामा थोरै फरक मत र भिन्न मत हुनेवित्तिकै छलफल तर्कविर्तक गर्नेवित्तिकै निषेध गर्न थालियो । यो सबै कुरा वर्गसङ्घर्षको दृष्टिकोण, अहिलेको वर्ग अन्तरविरोध सम्बन्धी जो विश्व मार्क्सवादी दृष्टिकोण छ त्यसलाई ठीक ढङ्गले अङ्गीकार गर्न नसक्ने, राष्ट्रियताको मुद्दालाई ठीक ढङ्गले अङ्गीकार गर्न नसक्ने वित्तिकै त्यसको परिणामले डेमोक्रेसीको क्षेत्रमा असर पर्नसक्छ । आर्थिक विकासको क्षेत्रमा पनि असर गर्छ । संस्कार र संस्कृतिका क्षेत्रमा पनि असर गर्छ र पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरामा पनि असर गर्छ । त्यसकारण विचार र दृष्टिकोणमा वैचारिक राजनीतिक समस्यामा देखिन्छ ।
यो सङ्घर्ष विश्वमै चलिरहेको र चर्किरहेको छ । त्यसको असर नेपाल र नेकपामा पनि पर्यो । यदि यही अवस्थाबाट अघि बढ्ने हो भने नेकपाको भविष्य चाहिँ कता जाँदैछ त ?
राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई ठीक ढङ्गले सुसङ्गठित गर्न सक्यौँ, व्यवस्थित गर्न सक्यौँ । त्यसका लागि पार्टीलाई पनि व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने यतिवेला साम्राज्यवाद सङ्कटमा पनि छ । युद्धको तयारीमा पनि ऊ छ । त्यसमा युद्धको केन्द्रविन्दु दक्षिण एसियलाई बनाउन खोजिरहेको छ । चाइनाको विरुद्धमा घेराबन्दी गर्ने र दक्षिण एसियाका हिमालयन क्षेत्रलाई युद्धको क्षेत्र बनाउन खोज्दैछ भन्ने हेर्दा देखिन्छ तर अन्तर्यमा साम्राज्यवाद गम्भीर सङ्कटमा नै छ । अर्थतन्त्रको हिसाबले पनि उसको योजना कमजोर भैसक्यो । अहिले कोभिड–१९ ले पनि त्यस्तो पुँजीवादलाई फ्लप खुवाउँदै गएको अवस्था छ । त्यसले गर्दा युद्धतर्फ बढी उन्मुख हुने, फौजी तागतको प्रभुत्व कायम राख्ने कोसिस गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ तेस्रो विश्वका चीन, रुस, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, एसिया लगायतका कैयौँ मुलुकहरु साम्राज्यवादको प्रभुत्वका विरुद्धमा छन् । एक प्रकारले विश्वको शक्ति सन्तुलन त्यो दिशामा गइरहेको छ । एक ध्रुवको ठाउँमा बहुधु्रवको अवस्थमा गइरहेको अवस्थामा नेपालजस्तो सानो मुलुकले विश्वको यो कन्ट्र्याडिसनलाई ठीक ढङ्गले पहिचान गर्न सकियो र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा दृढताको साथ अडिग रहन सक्यौँ भने नेपाललाई सदाका लागि स्वाधीन बनाउन सकिने सुनौलो अवसर पनि छ ।
यो कुरा र मान्यतालाई ध्यानमा राखेर हामीले पार्टी निर्माण गर्न सक्यौँ भने हाम्रो पार्टीको भविष्य उज्ज्वल छ, सम्भावनाहरु धेरै राम्रा पनि छन् । यदि यो भिजनलाई ठीक ढङ्गले लिन वा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने प्रकारान्तरले यो सिस्टम कोल्याप्स हुने दिशामा जान्छ । सिस्टम कोल्याप्स हुुनुभनेको प्रकारान्तरले अराजक र अस्थिरताको स्थिति सिर्जना हुन्छ । अस्थिरता सिर्जना हुनेवित्तिकै विदेशी साम्राज्यवादीहरुका निम्ति ढुङ्गा खोज्दा देउता मिलेजस्तो हुन्छ । उनीहरुलाई सैन्य क्रीडास्थल बनाउने उपयुक्त वातावरण बन्छ र विदेशी सेनाको अखडा नेपाल बन्ने र नेपाल अफगानिस्तानको मोडलमा जान सक्छ । त्यसकारणले गर्दा नेपाल कुन वेमा जाने भन्ने क्रसरोडमा रहेको अवस्था छ । यो अवस्थामा साम्राज्यवादको विरुद्धमा जाने कि सम्राज्यवादपरस्त लाइनमा जाने भन्ने दुई बाटोबाहेक अरु छैन ।
यस्ता गम्भीर राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरुमा छलफल गर्नुपर्ने छ । तर एक अध्यक्षले बैठक नै राख्न चाहिरहनुभएको छैन । यस्तो अवस्थामा पार्टीमा निकास कुन माध्यमबाट खोज्ने हो ? के छ उपाय ?
सहमतिमा जानुको विकल्प छैन । कसैले कसैलाई निषेध गरेर जाने अवस्थै छैन र हँुदैन । भिन्न मत रह्यो र विचार रह्यो भन्दैमा निषेध गर्दा निकास आउँदैन । कतिपय साथीहरुमा साम्राज्यवाद परस्त चिन्तन र सोच रहेछ भने पनि छलफल र बहस गर्दै लैजाने, पार्टी अन्तरजनवादको प्रक्रियाकोे धेरैभन्दा धेरै प्रयोग गरेर विचारमा एकरुपता कायम गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ । विचारमा एकरुपता कायम गर्न पार्टी मिटिङहरुमा छलफल, आलोचना, आत्मालोचना गरेर अघि जानुपर्छ । यदि हामी निषेधको बाटो र चिन्तनमा लाग्यौँ भने माहाभारतको यदुवंशीको तालमा पुग्छौँ । त्यसकारण निषेधको बाटोमा होइन, कसरी एकले अर्कोलाई कोअपरेटिभ गर्ने हो, कसरी समन्वयात्मक ढङ्गले समझदारीमा लैजाने, विचारहरुमा रहेका असमझदारीका विषयमा बसेर कसरी छलफल गर्ने भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।
पार्टीमा विवाद भइरहेका बेला नेताहरुबीच नै आरोप र प्रत्यारोप चलिरहेको छ । यो प्रवृत्तिले त स्थिति काबु बाहिर पुगेको हो कि भन्ने बुझिन्छ नि ?
कतिपय वैचारिक विषयमा सार्वजनिक छलफल पनि हुनसक्छ । त्यसलाई त्यति धेरै अन्यथा मान्नुपर्दैन । तर सानो विषयमा कुनै नेता, कार्यकर्ताका विरुद्धमा एकअर्कामा उचालेर निषेध, शत्रुतापूर्ण र दुस्मनीपूर्ण र अस्वस्थ ढङ्गले लैजाने कुरालाई अस्वीकार गर्नुपर्छ । कम्यनिस्ट आन्दोलनमा मतभेद स्वभाविक हुन्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मतभेद, बहस, छलफल र तर्कविर्तक हुन्छ । विचार निर्माण गर्दा यो निश्चित विधि पद्धतिमा लगेर पार्टीले सुल्झाउँछ ।